Pirezidantiin Oromiyaa Duraanii Du’aan Boqotan
Date: March 7, 2014Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, Finfinee, 8 Bitootessa 2014) Abbaa ijoollee sadii kan turan Obbo Alamaayyoo Atoomsaa Guraandhala 09 bara 2006 irraa eegalee Taayilaand Baankookitti wal’aanamaa otuu jiranii Bitootess 5, 2014 addunyaa kana irraa dua’aan boqotan.
Ob Alamaayyoo Atoomsaa (1969-2014)
Waggoota lamaan dabran keessa — dabree dabree akka rakkoon fayyaa isaan mudataa ture dubbatamaa ture. Garuu, ifaan kan taayitaa isaanii gad-lakkisuuf, ka Paartii isaanii — Dhaabbata Dimookiraatawa Uummata Oromootti iyyannaa dhiheessatan torbaan lama dura ture. Itti-gafatama Paartii fi ka Mootummaa gad-lakkisuun isaanii beeksisamee, otuu waan hin turiin immoo duuti isaanii dhaga’ame.
Reeffi Ob Alamaayyoo guyyaa dheengaddaa galgala keessaa Sa’aatii 9tti buufata xiyaaraa Boolee wayita ga’e qondaaltoonni ol’aanoofi jaalattoonni isaanii argamanii simataniiru.
Godina Wallagga bahaa aanaa Biilloo bosheetti abbaasaanii obbo Atoomsaa Miijanaafi haadhasaanii adde Ayyalachi Birruu irraa bara 1969 kan dhalatan obbo Alamaayyoo Atoomsaa umurii waggaa 45ffaatti akka boqotan beekameera.
Bara 1989 dura sirna Dargii keessaa waraana Ihadigiin booji’amanii erga turanii booda bara 1989 kaasee Ihaadigitti dabalamuun qabsoo karaa OPDO adeemsifamaa turetti akka makamanii fi yeroo san irraa eegalee sadarkaa addaddaatti amantummaan OPDO tajaajilaa akka turan beekameera.
Bara 1996 irraa eegalee hanga bara 2002tti waajjira koree jiddu galeessa dhaabbata Deemookraatawa Ummata Oromootti itti gaafatamaa damee siyaasaa ta’uun tajaalaniiru.
Bara 2010 irraa eegaluun dura taa’aa dhaabbata Deemookraasumaa Ummata Oromoo erga ta’anii booda bara 2011 Pireezdaantii bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta’uun tajaailaniiru.
Dhaabbatni Dimookiraasawa Uummata Oromoo – OPDO-n, walga’ii dhiheenya geggeesseen — Obbo MUKTAAR KADIR, dura-taa’aa, Aadde Aster Maammoo immoo itti-aantuu OPDO gochuun filatee jira.
Sirni awwaalcha isaanii magaalaa Finfinnee bataskaana qiddista kaatederaal keessatti guyyaa har’aa raawwatee jira.
Haga yoonaattis, du’a isanaiin kan walaqabte, matoota mootummaa irraa eegalee haga nama dhuunfaatti karaa addaddaa yaadoti kennamaa jiran; kan jaalatu isaan faarsa; kan jibbu immoo isaan abaara.
Dhugaan jiru, Ob Alamaayyoon gaariis hojjatan, hamaa, addunyaa kana irraa wagga 45tti darbanii jiru. Seenaanis waan isaan gumaachan waliin galmee seenaa Oromoo keessatti galmeesseera.
Town and City(required)
If you are happy to be contacted by Oromedia please leave a telephone number that we can contact you on. In some cases a selection of your comments will be published, displaying your name as you provide it and location, unless you state otherwise. Your contact details will never be published.
Previous Previous post: ድረስ ለፕ/ር ጌታቸው ሀይሌ – ታሪክ ተማሩ እንጂ፣ ከታሪክ አልተማሩም
Next Next post: ምርጫ ቦርድ ከመምህራን፣ ከሴቶችና ከወጣቶች ማህበራት ጋር የተጠናከረ ሥራ በመሥራት ላይ ይገኛል